Site Engineer Male (1) Post
တံတားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီး လစာ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. 262 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ